Home Somali News US: Maraykanka oo balanqaad u sameeyey dalalka Khaliijka
Waxaa Isniintii shalay magaalada Dooxa ee dalka Qatar ka dhacay kulan ay wada yeesheen Xoghayaha Arrimaha Dibada ee Maraykanka John Kerry iyo Wasiirada Arrimaha Dibada ee dalalka Carabta ee Khaliijka (GCC).
John Kerry ayaa dadaal ugu jiray inuu ka dhaadhiciyo dalalka Khaliijka inay taageeraan heshiiskii bishii hore laga gaaray wadahadalkii Barnaamijka Nukliyeerka ee dalka Iran.
Maraykanka ayaa sheegay in dalalka Khaliijka aysan wax cabsi ah ka muujin qaadista cunaqabateynta saarneyd dalka Iran ee dhanka dhaqaalaha iyo militariga. Kerry ayaa sheegay in meesha laga saaray khatartii laga qabay in hubka Nukliyeerka ay sameysato Iran.
Dhinaca kale Maraykanka ayaa u balan qaaday inuu sare u qaadi doono tababarada uu siiyo ciidamada dalalka Khaliijka iyo hubka uu ka gado wadamada Carabta si ay ugu adkeeyaan amaankooda.
Qorshaha hubka lagu siinayo dowladaha Khaliijka ayaa waxaa kamid ah sameynta nidaamka gantaalada difaaca oo ka hortagi kara weerarada gantaalada.